Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama: Zute Kachasị Mma na Akụkọ | Network Meteorology
Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama
Ekele diri ndi ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama nke a mere na akụkọ ntolite niile na ha enweela nnukwu uche, ọ bụ ya mere sayensị ji nwee ike ịzụlite ma kwe ka ụwa dịrị ka anyị si mara ya taa. E nwere ọtụtụ ngalaba sayensị dịka mgbakọ na mwepụ, bayoloji, ọbụlagodi ọgwụ anụ ahụ nke ndị ọkà mmụta sayensị ukwu na ndị ọkà mmụta sayensị ama ama pụtala nwee ike nyere aka na mmepe nke ụdị mmadụ.
N’isiokwu a, anyị ga-egosi gị ndị kacha mma ndị sayensị ama ama n’akụkọ ihe mere eme.
1 Ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama n’akụkọ ihe mere eme
1.3 Stephen Hawking
1.4 Marie Curie
1.5 Galileo Galilei
1.6 Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama: Charles Darwin
1.7 Nicolaus Copernicus
1.8 louis pasteur
1.9 Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama: Alexander Fleming
1.10 Onyinye Gregor
1.11 Thomas Alva Edison
1.12 Archimedes nke Syracuse
1.13 Ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama: Leonardo da Vinci
Ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama n’akụkọ ihe mere eme
N'ihi ịdị adị nke sayensị na ndị mmadụ nwere nnukwu uche bụ ebe mmadụ nwere ike ịga n'ihu ma nwee ọganihu ruo taa. Anyị ga-ahụ ndị bụ isi ndị ọkà mmụta sayensị ama ama bụ ndị nyeworo onyinye dị ukwuu na sayensị, ntakịrị banyere ndụ ha na ihe omume ha kachasị dị ịrịba ama.
A na-ahụta ya dịka onye sayensị kachasị ukwuu na narị afọ gara aga. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịmata onye ọkà mmụta sayensị a wee hụ ya na foto. Ọ bụ Nobel chọr'inwe na Physics na 1921. Onyinye nke sayensi nke aghaghi ibu ihe omuma. Ọ bụ ma eleghị anya ọganihu sayensị kachasị elu n'oge a.
Ọkà mmụta sayensị a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ga-abụ maka oge ọ dịrị ndụ. Ma ọ bụ na o mepụtara na physics, alchemy, astronomy, mgbakọ na mwepụ na ọ bụ onye mmewe. Iwu nke ike ndọda na akụkọ banyere etu o siri mepee ya mgbe ọ daa n'ihu n'isi ya mgbe ọ na-ehi ụra n'okpuru osisi, amaara nke ọma. Otú ọ dị, akụkọ a abụghị akụkọ ifo.
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị nke oge a na ndị ọkà mmụta sayensị a kacha mara amara mgbe Einstein gasịrị. Ọ bụ ọkachamara n'ihe ọmụmụ physics mara maka tiori ya nke eluigwe na ala na izugbe relativity. A makwaara ya na ọ na-arịa ọrịa amyotrophic lateral sclerosis na ọ bụ otu n'ime ndị mmadụ, ikekwe, ọtụtụ afọ enweela ike ịnagide ọrịa a. N'ihi nzube ya, ọ na-enwe ike inye ọhụụ maka ọrịa a. Ọ natara ihe nzere nzere ruru iri na abụọ akpata na dị iche iche kwuo.
Nke a bụ nwanyị si Poland ma bi na France. Ọ bụ nwaanyị sayensị kacha mara amara n’ụwa. Amaara n'ihi na ọ bụ naanị otu onye enwetaraghị onyinye Nobel abụọ. Otu n’ime ha na onwu na onye ọzọ n’ihe ọmụmụ physics. Ọ bụ onye ọsụ ụzọ na-amụ banyere redioacactivity wee chọpụta radium na polonium. Ahụ ike ya kaara njọ kemgbe ọtụtụ afọ n'ihi ikpughe na-aga n'ihu na radieshon.
Onye ọzọ amaara ama n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị narị afọ nke XNUMX na XNUMX bụ Galileo Galilei. Nke a ara ọkà mmụta sayensị niile ubi nke ihe ọmụma na e nwere aka. Achọrọ ya ka ọ bụrụ mmụta gbasara mbara igwe, nka na nka. Ewere ya dị ka ndị ọgbọ sayensị dị ka anyị si mara ya taa.
Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama: Charles Darwin
Ná mmalite ndụ ya, ọ ga-abụ onye ụkọchukwu Anglịkan. Otú ọ dị, ọ kwụsịrị ịkọ banyere evolushọn ndu. Ruo taa, nchoputa enwetara na mgbanwe na nhọrọ okike bụ ihe ọ bụ ha ka a na-atọ ntọala na bayoloji nke oge a. Ọ gụrụ akwụkwọ banyere ụdị dịgasị iche iche nke Galapagos Islands wee kọọ banyere ọdịiche nke omume na omume nke finches nke agwaetiti a. Ọ bụ otu n'ime ọmụmụ a kacha mara amara na akụkọ ntolite niile, yana ọrụ ya nke akpọrọ “Mmalite nke umu".
Ọ bụ otu n’ime ndị na-enyocha mbara igwe kachasị mkpa n’akụkọ ihe mere eme nke tọrọ ntọala sayensị maka mgbanwe na mbara igwe. Mụ na Galileo. Ọ bụ ọkà mmụta sayensị Poland nke mepụtara usoro heliocentric (njikọ). Echiche a kwuru na anyanwụ abụghị kpakpando nke gbara ụwa gburugburu, kama na ọ bụ ụwa gbara anyanwụ gburugburu.
Ọ bụ onye sayensị nke gbanwere echiche niile gbasara ọrịa na-efe efe. Ọ bụ ya guzobere microbiology nke oge a. Otu n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama rụzuru bụ na ọ nwee ike ịchọpụta ogwu mgbochi oria oria. Ke adianade do, wheat usoro iji mee ka sterilaiz nri nke mechara kpọọ dị ka pasteurization na nsọpụrụ ya.
Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama: Alexander Fleming
O bu ihe gbasara onye sayensi nke n’eme ka aru ogwu di irighiri oria. Ọtụtụ n’ime ọrịa ndị a bụ ọnwụ ọnwụ otu narị afọ gara aga. Otu n’ime ihe ndị kacha mkpa ọ chọpụtara bụ ero penisilini. Ejirila ihe a rue taa ma bụrụ ọrụ maka ịchekwa nde mmadụ ndụ gburugburu ụwa.
Ọ bụ onye ọzọ nke ndị ahụ sitere na ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama bụ, n'ihi ọrụ ha na osisi pea, nwere ike ịtọ ntọala nke usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ọ chọpụtara otú e si kesaa àgwà dabere na mmekọrịta na ịda azụ. N'ihi nke a, o wepụtara ọtụtụ usoro iwu a maara taa dịka iwu Mendel.
Onye ọzọ amaara ama ndị sayensị n’ụwa niile. Ọ nọwo na-ede akwụkwọ nke ọtụtụ mgbalị ọ bụ ezie na ọ ga-kwuru na ọ dịghị ole na ole na-atụle ya ka ọ bụ n'ezie ọtụtụ biiri echiche mgbe eke ọhụrụ ngwaọrụ. Ọ bụ onye na-ese okwu na ụwa sayensị. Ihe enwere ike ighota banyere agwa a bu na n’agbanyeghi na o bu onye okachasi n’icheputa ihe, o ma otua esi erite uru site n’icheputa ihe ma gbanwee onwe ya dika onye ahia di nkpa.
Archimedes nke Syracuse
Ọ bụ otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị ama ama ama ama maka ọganihu ya na physics na mgbakọ na mwepụ. A maara ihe ọmụma ya dịka ụkpụrụ nke lever na ụkpụrụ Archimedean.
Ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama: Leonardo da Vinci
E wezụga na ọ bụ nnukwu onye na-ese ihe, ọ bụ ezigbo onye na-emepụta ihe. Ọ raara onwe ya nye na ngalaba sayensị dị iche iche. N'etiti ha anyị na-ahụ botini, injinia, mbara igwe na bayoloji na mgbakwunye na ịme ihe ọmụmụ dị mkpa na eserese zuru ezu nke mmewere mmadụ. Otu n'ime ihe mmuta nke onye sayensị a bu na o nwetara ozu site na ebe a na-edebe ozu iji nwee ike ime ka ha di ala n'ulo.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ndị ọkà mmụta sayensị ama ama n'ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ndị ọkà mmụta sayensị ama ama
Mmadu ole gunyere onwa